Us Hacks 🥇 Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
ဘယ်သူ့ကိုမှသံသယဖြစ်ဖွယ်အရှိဆုံးသူထက်ဘယ်သူ့ကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ဘယ်သူ့ကိုမှအချက်ပေးမှုမဖြစ်စေဘဲသတ်ပစ်မယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါ။ Us တို့တွင် Coco သည်နောက်ဆုံး၌ Gamepron သို့သွားခဲ့သည်။
With Us Hack ကိုဝယ်ပြီးပြီလား။ ဒီမှာနောက်ခြေလှမ်းများကိုရှာပါ
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Us ကိုမ ၀ ယ်မီသင်ဝယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည့်ကိရိယာကိုမကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ်သို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်နေဆဲရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုအမြဲတမ်း update လုပ်နေစဉ်အချို့အခြေအနေများတွင်အချိန်ဖြန့်ဝေမှုနှေးကွေးသည်။ များသောအားဖြင့်လက်ငင်းဖြစ်သော်လည်းနာရီအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးသည် HWID သော့ခတ်ထားခြင်းခံရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည် - သင်၏ကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေကြောင်းသေချာပါစေ။ product key ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ပြန်အမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။
ငါတို့ရွေးချယ် ငါတို့တို့တွင် hack
Us Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & More တို့တွင်
ကိုကို Hack က
ယ်ယူရန် ငါတို့တို့တွင် Hack in4ခြေလှမ်းများ
ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှမ်းမိုးရန်သင်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးပါ ၀ င်သည့် hack ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင် hack ကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁၀၀% လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုစနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ပါ
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ယူပြီးနောက်၎င်းကို Us Us ကိုချက်ချင်းကူးယူရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Gamepron ငါတို့အကြား hacks
Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးကိုအမြဲဂုဏ်ယူခဲ့ပြီး၊ ငါတို့တို့တွင် Coco သည်ချွင်းချက်မရှိပါ။ ဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာကိုသင်ရှာနိုင်လျှင်အလေးသာမှုမှာ၎င်းဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးစံနှုန်းအမြဲပြည့်မီရန်သေချာစေရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအကောင်းဆုံးကိရိယာများနှင့်တီထွင်သူများနှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။ Gamepron မှကုန်ပစ္စည်းသော့တစ်ခုကို ၀ ယ်လျှင်သင်ဟာ optionluster တစ်ခုကိုဘယ်တော့မှရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ငါတို့အားလုံးငါတို့အားပေးသည်မှာငါတို့၏ကစားပွဲအားလုံးနီးပါးအနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါရပ်အားလုံး (ပြီးတော့အချို့သော) ကငါတို့ကိုကိုး၏တန်ခိုးကိုသက်သေပြသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုအရေအတွက်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်ဆင့်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းများကိုအဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေသည်။ In-game တွင်ရရှိနိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုသော့ဖွင့်ပြီးသင်၏ဇာတ်ကောင်ကိုအရောင်အသွေးစုံသောလိုလားသူတစ် ဦး နှင့်တူအောင်လုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်သင် Killer Mod သည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုပြရန်“ Killer Mod” ကိုပင် enable လုပ်နိုင်သည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများ၊ မတူညီသောအချိန်များစွာသောရွေးချယ်စရာများနှင့်၊ အကျွန်ုပ်တို့အားအက်ပလီကေးရှင်းတွင်တွေ့ခဲ့သမျှသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည် Gamepron သည်မည်သူမဆိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသည်။
Us ကိုကိုများထဲတွင် ၀ င်ရောက်ကစားသမားများအားကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးမပါဘဲကြီးမြတ်မှုရရှိစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ပြသနာဖြေရှင်းရန်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သရုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမနှစ်သက်ပါ။ Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးနှင့်လည်းခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သဖြင့်၎င်းတို့ထံမှမည်သည့်အရာကိုမျှော်လင့်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လူအများအားပြုလုပ်ထားသောမည်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုမဆိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး developer များအနေဖြင့် Gamepron အသုံးပြုသူများအားပြင်ဆင်မှုများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Current Us Coco hack ကိုသုံးစွဲသူများသည် cheat နှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်ကောင်းသောအရာများသာရှိသည်။ အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ သငျသညျ glitches သတိထားမိသို့မဟုတ် hack settings ကိုချိန်ညှိခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲရှိသည်သွားကြသည်မဟုတ်, ချောမွေ့စွာ (နှင့်အပြုသဘောဆောင်!) အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်အရာအားလုံးပွတ်ထားပြီး။ သင်သည်ငါတို့အား Impostor ဖြစ်စေ၊ Crew တွင်ပါ ၀ င်သည်ဖြစ်စေ Us Us ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မကြားဖူးသောထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအဆင့်ကိုရရှိရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Online မှ hacks များအတွက်နံပါတ် ၁ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော Gamepron မှသင်၏ငါတို့အသားများကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လုံခြုံစွာနေပါ။
သရုပ်ဆောင် Us တို့တွင်ပါ
ငါတို့ဝိညာဉ် Ghost အကြား
ငါတို့အကြား Infinite sabotage
အကောင်းဆုံး ငါတို့တို့တွင် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ
ငါတို့ထဲ၌ Coco Player ESP ပါရှိသည်
Player ESP အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ မြေပုံ၏မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ Gamepron ကို အသုံးပြု၍ ကစားသူတိုင်းကိုကြည့်ပါ။
ငါတို့ထဲ၌ Coco Player ESP (အမည်၊ အကွာအဝေး) ရှိသည်။
ငါတို့အကြားကစားနေစဉ်ကစားသမား၏သတင်းအချက်အလက် (သူတို့၏အမည်များနှင့်အကွာအဝေးကဲ့သို့) ကိုမြင်ခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးရှိနိုင်သည် Killer နှင့် Crew အဖွဲ့ဝင်များသည်ယခုအချိန်တွင်လွယ်လွယ်ကူကူရှူနိုင်သည်။
ကိုကိုခို Ghost Vision ထဲမှာငါတို့
Among Us Coco Ghost Vision modလ်ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်သရဲများအားလုံးပုန်းနေကြသည့်နေရာကိုကြည့်ပါ။ အန္တရာယ်ဘယ်လောက်များများရှိနေလဲကြည့်ပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကိုကိုကို Infinite Sabotage ကျွန်တော်တို့တို့တွင်
ငါတို့ကို Coco Infinite Sabotage ပါ ၀ င်သည့်အားဖြင့်အလိုအလျောက် Sabotage သည်အခြားကစားသမားများမည်သို့ပင်လုပ်စေကာမူသင်အနိုင်ရရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။
ငါတို့ထဲ၌ Coco Impostor Mod
သင်ဟာ Impostor ကိုတစ်ချိန်ချိန်သေချာအောင်သေချာစွာပြုလုပ်နိုင်ရန် Among ငါတို့ Coco Impostor Mod ကိုသုံးပါ။ Among Us Coco ကိုအသုံးပြုပြီးဂိမ်းကိုအစမှထိန်းချုပ်ပါ။
ငါတို့ထဲ၌ Coco Kill Cooldown Mod
Kill Cooldown ကောင်တာသည်အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်ပြesomeနာရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ဤနေရာကို Gamepron တွင်လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Us တွင် Ghost Mod ကိုပြပါ
Killer နှင့် Ghosts နှစ်မျိုးလုံးကိုပြ သ၍ ငါတို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောငါတို့ထဲ၌ရှိသည့် Coco Show Mod ကို သုံး၍ Gamepron တွင်သာရနိုင်သည်။ ဖုံးကွယ်စရာမလိုတော့ပါ
ငါတို့ထဲ၌ Coco Tasks Mod
သင်အနေဖြင့်တာ ၀ န်ရှိသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လုပ်ငန်းများကို Impostor အနေဖြင့်ပြီးမြောက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီး (သင်အနိုင်ရရှိရန်လမ်းကိုလှည့်စားခြင်း) ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အချိန်သည်အနှစ်သာရ၏၊ ထို့ကြောင့်ငါတို့ကို Coco Speed ​​Boost အင်္ဂါရပ်ကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပိုမိုသက်သာစေပါ။ လုပ်ငန်းများကိုဖြတ်ပြီးမြန်ဆန်!
ငါတို့ထဲမှ Coco Disable Chat Delay
ချက်တင်နှောင့်နှေးမှုကိုတားဆီးခြင်းသည်သင့်အား Impostor ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့် Crew အားသူတို့နည်းတူထိရောက်စွာဆက်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
ဤ hack သည်မည်မျှအသုံး ၀ င်သည်ကိုပြောရန်ခဲယဉ်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့ - ဤသည် Us တို့တွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်အသုံးအဆောင်မှမဆိုအကောင်းဆုံးငွေဖြစ်သည်။ သင်လိမ်တာကိုမကောင်းဘူး၊ ငါတို့တွင်အစဉ်အလာဖြင့်အနိုင်မရနိုင်လျှင်၊ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားသောအခါဂိမ်းများသည်ပျော်စရာပျော်စရာကောင်းပြီး With Us ကိုကိုကိုအသုံးပြုခြင်းက၎င်းကိုကူညီနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ကို Task ကို Mods များထဲတွင်
Ghost Vision တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါဝင်သည်
ငါတို့ထဲမှအခြားဟက်ကာများနှင့် cheat များ
ငါတို့ထဲ၌လူကြိုက်များ Coco ဟက်ကာနှင့် cheat
ကျွန်ုပ်တို့အနက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နီးပါးနီးကပ်လာခဲ့ပြီဖြစ်ရာလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်နီးပါးကဖြန့်ချိခဲ့သည်ဟုသင်စဉ်းစားသောအခါ၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်။ အခုတော့လူတွေကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းအကြောင်းသိလာကြပြီ။ သူတို့ဟာသိုးလိုသိုးအုပ်တွေလိုစီးဆင်းနေကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ပြproblemနာတစ်ခုတည်းကရောစပ်ထဲမှာ“ ချွေး” အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သင်သာအချိန်ကောင်းကောင်းရလိုပါက lob ည့်ခန်းတိုင်း၌ယှဉ်ပြိုင်သောကစားသမားများရှိနေသည့်အခါသင်မလုပ်နိုင်ပါ၊ သို့သော် Us Us Coco ကို သုံး၍ ယင်းကိုပြုပြင်နိုင်သည် လူအများကြားတွင်ကိုကိုကိုအားသာချက်တစ်ခုရရှိရန်အသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့်ကစားသမားအတွက်မဆိုအသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများအတွက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကစားသမားများပင်ဤ cheat ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပို၍ အနိုင်ရလိမ့်မည် (ကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်) ။
Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဟက်ကာများနှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သည့် cheat များနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာကမ်းလှမ်းသည်ကိုကြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ကလိမ်တာလဲ Gamepron ကိုသုံးပါ။
သင်သည်ငါတို့အား Impostor အနေဖြင့်ဝီရိယစိုက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း Crew ပြပါ။ သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့် With Us Coco Task Mod ကိုအသုံးပြုပြီး။ အသင်းတစ်ခုစီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော (သို့မဟုတ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သော) လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာသင်သည်သင်၏ပွဲစဉ်ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် host မဟုတ်လျှင် network နှင့် client settings ကိုသင်ချိန် ညှိ၍ မရပါ၊ ထို့ကြောင့် Us Us ၏ Coco Task Mods များကိုသင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ သင်ကအနိုင်ရရှိမှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရဖို့ဒါမှမဟုတ် Killer / Impostor ကိုအဖိုးတန်သောအချိန်များဆုံးရှုံးနေသည်ဟုခံစားရစေလိုသည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဂိမ်းတစ်ခုမှတဆင့်စွမ်းအင်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်နောက်တစ်ခုသို့တက်ရန်သင်လုပ်နိုင်သမျှသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်။ ဤအရာသည် Us Us သည် Coco hack ကသင့်အား Task Mods နှင့်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အတိအကျဖြစ်သည်။
အသစ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးသည်၎င်းမှအကျိုးရယူနိုင်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးအဖွဲလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရသောအချိန်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်။
Ghost Vision သည် Crew အသင်း ၀ င်များအား Ghosts များရှိရာနေရာကိုရှာဖွေရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အသင်းဖော်များထံမှဆက်သွယ်မှုကိုလုံးဝအားထားစရာမလိုပါ။ ငါတို့တို့တွင် Coco ပြန်လည်ကျရောက်လာသောအခါမိုက်ကရိုဖုန်းဖွင့်ရန်မလိုပါ! The Impostor သည်ယခင်ကသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်နေရာတွင် Ghosts ကိုရှာဖွေပြီးသတိပြုပါ - သင်အလိုရှိသည့်အချိန်၌ကစားစဉ်၎င်းကို ပိတ်ထား၍ ဤရွေးစရာကို enable လုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏မျက်နှာပြင်တွင် Ghosts အမြဲတမ်းပေါ်လာစရာမလိုပါ။ သင်၏အသင်းသည်ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုပါက၎င်းတို့သည်ယင်ကောင်များကဲ့သို့ကျဆင်းလာပါက Ghost Vision ကိုဖွင့်ရန်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ရောက်ပြီ။
Impostor သည်သီးသန့်အခန်းတစ်ခုကိုနှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်သင်၏အသင်းဖော်များကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Ghost Vision ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ဆုံးရပ်တည်ချက်ရရှိရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်။
Speed ​​ကလူသိအများဆုံးဗျူဟာမြောက်ဂိမ်းများကိုပင်သတ်ပစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ငါတို့တို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီသောငါတို့ကိုး Coco hack အတွက် Speed ​​Boost mod သည်ဤကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ Impostor အဖြစ်ကစားသောအခါ Speed ​​Boost ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုပုံမှန်ထက်မြန်စေပြီးသင်၏သားကောင်များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်စေလိမ့်မည်။ သူတို့၏သတ်ဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်စဉ်းစားရန်မည်သူမဆိုအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ဘယ်သူ့ကိုမှစတော့ရှယ်ယာဂိမ်းချိန်ညှိချက်များနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုလမ်းမရှိသောကြောင့်, Crew အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး Takedown ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်အတူမြန်မြန်ဆန်ဆန်။ လုပ်ငန်းများသည်သင့်အားစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ Speed ​​Boost Mod သည်ထိုပြissuesနာများကိုအတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Among Us Coco တွင်ပါဝင်သောအင်္ဂါရပ်များမှာ Impostor အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Crew အသင်းဝင်များအတွက်လည်းအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ “ Kill Cooldown” ကိုပိတ်ပါ။ တစ်ကြိမ်တည်းတွင် Crew တစ်ခုလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် Infinite Sabotage ကို enable လုပ်ပြီး Crew အဖွဲ့ဝင်များကိုသူတို့၏လုပ်ငန်းများကိုပြီးမြောက်အောင်တားဆီးပါ။ ရွေးချယ်မှုများစွာကသင့်ကိုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေပြီးရှင်သန်မှုကိုပိုရှည်စေပြီးအနိုင်ရရှိမှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကိုပေးသည်။ သင် Impostor ဖြစ်သည့်အခါသင်၏ lob ည့်ခန်းတစ်ခုလုံးသည်သင့်အားဆန့်ကျင်လျက်ရှိသော်လည်းသင့်တွင် Crew အသင်း ၀ င်အဖြစ်နံပါတ်များရှိသော်လည်း Impostor တွင်အားသာချက်များရှိနေသေးသည်။
ဒီ cheat ကိုသုံးပြီးဂိမ်းထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ဖန်သားကောင်အသစ်ပေါ်၌သင်၏လက်များကိုရရန်အတွက်သင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုကြိတ်စရာမလိုပါ။ Us Us သည် Coco ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အတွက်အရာရာကိုသော့ဖွင့်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကိုသင်၏တစ်နေ့တာအလုပ်အကိုင်ကဲ့သို့ကစားရန်မလိုတော့ပါ!
ကျွန်တော်တို့ကို Hacks တို့တွင် မေးခွန်းလွှာ
ငါတို့တို့တွင်ကစားခဲ့ဖူးပြီးယခင်က cheat များသုံးခဲ့သူများသည် hacking အတွက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်အပြစ်ပေးခံရခြင်းသည်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသိကြသည်။ Us တို့တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုကိုးသည်အာမခံချက်ရှိသည်
Gamepron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအားသာမန်အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသောကိရိယာများကိုသာပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ # 1 ပံ့ပိုးသူနှင့်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ပြီးသင်၏အကောင့် (နှင့်သင်၏တိုးတက်မှုအားလုံး) ကိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။
Speed ​​သည် Us တွင်ကစားနေစဉ်အလွန်အသုံးဝင်သော attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အချိန်ကာလသည်အနှစ်သာရအမြဲဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အကောင့်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေစရာမလိုဘဲ With Us ကိုမြှုပ်နှံပြီးသောအခါတစ်စက္ကန့်လျှင်မကုန်ပါစေနှင့်။ အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုအတွက်အပိုဆုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့တို့တွင်ငါတို့ Ghost Mod
Ghost Mods သည်သင်၏အသင်းဖော်များအနေဖြင့် Crew အသင်း ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်အသတ်ခံရသည်ကိုသင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည် Impostor ကိုရှာဖွေစဉ်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သင်၏အသင်းဖော်များသေဆုံးသည့်နေရာကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသူတို့နှင့်လည်းစကားပြောခွင့်ရနိုင်သည်။ Full Vision သည်ငါတို့ထဲမှကစားသမားများအများဆုံးကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့တို့တွင်ငါတို့ Task ကို Mods
Task Mods များကိုသင်၏ဆန့်ကျင်သောအဖွဲ့၏တိုးတက်မှုကိုနှေးကွေးစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ အနည်းငယ်ကျန်သည်ဖြစ်စေ၊ အသင်းတစ်ခုလုံးကကန်နေဆဲဖြစ်စေ၊ Task Mods ကိုသင်အိမ်ရှင်အဖြစ်မှသာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ထိုအခြေအနေကိုထိ မိ၍ လဲမိပါကကျွန်ုပ်တို့ထဲ၌ငါတို့ထဲ၌ Coco loaded နှင့်သွားရန်အဆင်သင့်ရှိနေကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အဘယ်ကြောင့်ငါတို့တို့တွင်ငါတို့ Delayer chat
သင် Impostor ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Chat Delayer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခြင်းကိုတားဆီးပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုကစားသမားတစ်ယောက်သတ်ပစ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တစ်ယောက်ယောက်က Panic Button ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောနိုင်တဲ့အတွက်ချက်တင်စကားပြောလို့ရတယ် အကယ်၍ မင်းကသင့်ကိုလှည့်စားသူဖြစ်တယ်လို့ကောလာဟလတွေကိုမဖြန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းဘယ်လိုဆုံးရှုံးသွားမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှအကောင်းဆုံး hack များကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
သင်၏ Us ကိုဟက်ကာများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်ရုန်းကန်နေရခြင်းသည်အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Gamepron သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူစွာစီမံနိုင်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအားအနားယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောလက်စွဲစာအုပ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်လုပ်ရန်မလိုတော့ပါ။ hack သည်မှန်ကန်စွာတပ်ဆင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လုံးဝအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းကိုမိမိဘာသာကိုင်တွယ်ရမည် (နည်းပညာဆိုင်ရာ geek ဖြစ်ရန်မလိုအပ်) ။
Gamepron ထံမှ cheat များကိုသုံးသောအခါသင်အမြဲတမ်းလုံခြုံမှုရှိလိမ့်မည်။ Us Coco တွင်ထူးဆန်းစွာခိုးယူထားသော anti-cheat ကာကွယ်မှုသည်သင့်အားတားမြစ်ခြင်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ hack ရန်ခွင့်ပြုသည် - slot အကန့်အသတ်များလည်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤ cheat များအားလုံးကို၎င်းတို့အား ၀ င်ခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပရီမီယံအားသွင်းရသည့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
Gamepron သည်သုံးစွဲသူအားကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ၎င်းတွင်ကုန်ပစ္စည်းသော့အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ၁ ရက်၊ ၁ ပတ် (သို့) ၁ လထုတ်ကုန်သော့တစ်ခုကို ၀ ယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဦး စားပေးကိစ္စဖြစ်သည်။ သင် cheats ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးချင်တယ်၊ ပြီးတော့သင့်တော်တဲ့ product key ကို ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါ။
Awesome ကို ငါတို့တို့တွင် ကို Hack အင်္ဂါရပ်များ